Misokatra ny trano fiangonana vaovao – FJKM Ambavahadimitafo Misokatra ny trano fiangonana vaovao |
Misokatra ny trano fiangonana vaovao
Toy ny fanao isaky ny fety lehibe dia manatanteraka ny fanisana ny olona tonga miangonana ny Sampana Tanora Kristiana (STK).
Tamin’ny ny 6 mey 2007 dia nahatra 1026 ny isan’ny olona : 520 taty ambany aryt 506 kosa tany ambony.
Marihana fa mety mahazaka olona eo amin’ny 1300 eo ny olona mety tafiditra ao io trano vao nitarina io. Nisy ihany ireo olona anefa mbola nijanona taty ivelany : asa na noho ny hafanana. Azo lazaina izany fa dia tratra ny tanjona tamin’ny fanorenana ny rihana mba hampitombona ny toerana ao am-piangonana